Constipation during Pregnancy - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဗိုကျဗိုကျတို့ ဝမျးခဏခဏခြုပျလို့ စိတျညဈနပွေီလား?
ဗိုကျဗိုကျ ၁၀ယောကျမှာ ၅ယောကျလောကျက ဒီပွသနာနဲ့ ကွုံတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ။ အဓိကအကွောငျးရငျး ၂ ခုကတော့. ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ဟျောမုနျးမြားပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ ကိုယျဝနျရငျ့မာလာတဲ့အခါမှာ ဖှံဖွိုးလာတဲ့ သန်ဓသေားကွောငျ့ ကွီးထှားလာတဲ့ သားအိမျက အစာဟောငျးအိမျကို သှားဖိသလိုဖွဈနခွေငျးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။တဈခါတဈခါမှာတော့ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးတှထေဲ သံဓာတျပါဝကျမှုပမာဏ အရမျးမြားနခွေငျးသညျလညျးပဲ ဝမျးခြုပျစတေဲ့ အကွောငျးတဈခုဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးကွီးကွီးမားမားမရှိပမေယျ့ တဈခါတဈရံမှာတော့ ဝမျးသှားတဲ့အခါ အရမျးညှဈသှားရတာ၊ဝမျးအရမျးမာတာမြိုးကွောငျ့ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ လိပျခေါငျးရောဂါဖွဈလာတာ၊ အစတညျးက လိပျခေါငျးရောဂါရှိနသေူတှမှော ပိုဆိုးလာတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဗိုကျဗိုကျတို့ဝမျးခြုပျခွငျးကို ဘယျလျုကာကှယျမလဲ? ဘယျလိုသကျသာအောငျလုပျကွမလဲ?
ဥပမာ – ပေါငျမုနျ့၊ပဲ၊ဆနျလုံးညို၊လတျဆတျသော အသီးအနှံ ဟငျးသျးဟငျးရှကျမြား
ရမြေားမြားသောကျပါ။တဈနလြေှ့ငျ လတျဆတျသောသဈသီးဖြျေါရညျတဈခှကျသောကျပါ။မနကျအိပျရာနိုးနိုးခွငျးကို ရနှေေးနှေးတဈခှကျလယေကျသောကျခွငျးက ဝမျးမှနျစဖေို့အားပေးပါတယျ။
ဥပမာ – လမျးလြှောကျခွငျး၊ရကေူးခွငျး၊ယောဂကငျြ့စဉျ စတာတှကေ ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာစတေဲ့အပွငျ ဗိုကျဗိုကျအနနေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ပိုကိုကျညီပွီး ပိုမိုပေါ့ပါးသှကျလကျစပေါတယျ။
-ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွသပါ။လိုအပျပါက သံဓာတျပါဝငျမှုနညျးသော ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးကို ညှနျကွားပေးပါလိမျ့မညျ။
ဗိုက်ဗိုက်တို့ ဝမ်းခဏခဏချုပ်လို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား?
ဗိုက်ဗိုက် ၁၀ယောက်မှာ ၅ယောက်လောက်က ဒီပြသနာနဲ့ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်း ၂ ခုကတော့. ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဟော်မုန်းများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရင့်မာလာတဲ့အခါမှာ ဖွံဖြိုးလာတဲ့ သန္ဓေသားကြောင့် ကြီးထွားလာတဲ့ သားအိမ်က အစာဟောင်းအိမ်ကို သွားဖိသလိုဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေထဲ သံဓာတ်ပါဝက်မှုပမာဏ အရမ်းများနေခြင်းသည်လည်းပဲ ဝမ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကြီးကြီးမားမားမရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ အရမ်းညှစ်သွားရတာ၊ဝမ်းအရမ်းမာတာမျိုးကြောင့် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ်လာတာ၊ အစတည်းက လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိနေသူတွေမှာ ပိုဆိုးလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်ဗိုက်တို့ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ဘယ်လ်ုကာကွယ်မလဲ? ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ကြမလဲ?
ဥပမာ – ပေါင်မုန့်၊ပဲ၊ဆန်လုံးညို၊လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံ ဟင်းသ်းဟင်းရွက်များ
ရေများများသောက်ပါ။တစ်နေ့လျှင် လတ်ဆတ်သောသစ်သီးဖျေါ်ရည်တစ်ခွက်သောက်ပါ။မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးခြင်းကို ရေနွေးနွေးတစ်ခွက်လေယက်သောက်ခြင်းက ဝမ်းမှန်စေဖို့အားပေးပါတယ်။
ဥပမာ – လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ရေကူးခြင်း၊ယောဂကျင့်စဉ် စတာတွေက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပြင် ဗိုက်ဗိုက်အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုကိုက်ညီပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးသွက်လက်စေပါတယ်။
-ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြသပါ။လိုအပ်ပါက သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးကို ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။
What to do for high fever